Ny Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Tiorka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2017 3:19 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Oktobra 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Noraisina tsara tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka ny andiana Bilaogy Tiorka tamin'ny herinandro lasa teo, ary nahitana dikanteny Tiorka tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny tranokala Blog Kardesligi mihitsy aza. Tsy ny dikanteny ihany no tao amin'ny Blog Kardesligi fa fanehoan-kevitra momba ny tetikasan'ny Global Voices (amin'ny teny Tiorka) ihany koa. Nisy ireo tranonkala Tiorka hafa nanonona ny lahatsoratra Global Voices, anisan'izany ny Metrobloggling: Istanbul sy Ignore Me if You Can. Ankoatra izany, nahazo fisaorana maro momba ireo lahatsoratra ihany koa aho. Nahatsiaro voadoka tanteraka aho ary manantena fa afaka manao ny rariny amin'ireo bilaogy Tiorka ankehitriny sy amin'ny hoavy.
Noho izany, andeha hiresaka fihariana …. Andininy anankiray: Tranonkala miompana amin'ny sakafo mahafinaritra antsoina hoe Portakal Agaci (Hazo Laoranjy), raha amin'ny teny Tiorka izany, dia tranonkala mahafinaritra ahitana sary manintona dia manintona!
Mikasika ny Fidiran'i Torkia tamin'ny fampiraharahana ofisialy miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana, izay niresahanay ny tranga tamin'ny herinandro lasa teo. Ny bilaogy Mavi Boncuk, izay mifantoka amin'ny famoahana lahatsoratra sy vaovao momba an'i Tiorkia, ny ankehitriny sy ny lasa kosa dia namoaka lahatsoratra vao haingana mikasika ny resak'i Torkia tamin'ny Vondrona Eoropeana. Manontany ny anton'ny faniriana ankehitriny hiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny lahatsoratra, ary manontany ny fahombiazan'ny fidirana amin'ny antoko politika izay mihalehibe toy izao. Fa tsy haiko ny milaza izany araka ny fomba firesahan'ny lahatsoratra azy, ity sombiny kely:
This putative transnational behemoth is the natural consequence of the series of decisions, taken for the most lofty of motives, that culminated in this week's final pressing of the red button on Turkey. And therefore it is this monster-sized EU that we need to start thinking about and planning for. Becoming almost as large as the USAIf we now wonder how on earth to manage a union with almost as many states as the USA without the trappings of a federal superstate, then this is a question that we should have asked a long time ago. But it is surely naïve and simplistic to imagine that a union of 40 countries, the majority of them lying east of the old Iron Curtain, can simply become a version of the old western EU15 writ large. For better or worse that union, comfy and coherent, is gone forever.
Ity biby iraisampirenena lazaina ho goavana ity dia vokatra voajanahary avy amin'ireo andiana fanapahan-kevitra, noraisina avy amin'ny antony ambony indrindra, izay niafara tamin'ny fanindriana ny bokotra mena tao Tiorka tamin'ity herinandro ity. Nefa ity Vondrona Eoropeana mitovy habe amin'ny bibidia goavana ity no tokony hoeritreretantsika sy hiomanantsika hanaovana planina. Ho lasa lehibe tahaka ny Etazonian'i Amerika, manontany tena isika ankehitriny hoe ahoana no fomba hitantanana ny vondrona miaraka amin'ny fanjakana marobe tahaka an'i Etazonia tsy miditra amin'ny fandriky ny fanjakana lehibe federaly iray (eo amboniny), nefa izany no tokony ho efa nanontaniantsika hatry ny ela. Saingy azo tsontsa sy fanatsoran-javatra loatra fa hanana ny endriky ny vondrona eoropeana tandrefana taloha [ EU15] ny vondrona ahitana firenena 40, izay ao atsinanan'ny Rindrim-by taloha ny ankamaroan'izy ireo. Ho amin'ny tsara na ratsy kokoa, lasa tsy hita mandrakizay ity vondrona milamina sy mirindra tsara ity.
Olana hafa atrehin'ny Vondrona Eoropeana sy Torkia ny olana momba ny gripam-borona, izay loha-laharana amin'ny fandaharam-potoanan'ny Vondrona Eoropeana amin'ity herinandro ity. Metin avy ao amin'ny Talk Turkey indray nanoratra mikasika ny gripan'ny vorona sy ny fahitana azy vao haingana tao amin'ny tanàna roa ao Torkia, izay nitarika ny fandringanana ireo vorona. Nanoratra izy fa raha mbola vaovao ny zava-misy, dia azontsika antoka ny hahafantatra bebe kokoa momba izany amin'ny hoavy raha mitohy ny valan'aretina. Yildiz, avy amin'ny bilaogy mitondra ny anarany ihany, Yildiz (Tiorka) nanoratra momba ny fahataitairana mahery vaika noho ny gripam-borona sy ny fahitana azy vao haingana tany Torkia sy Romania. Ny zavatra tiako indrindra momba ity lahatsoratra manokana ity dia ny sarina lela tonga eo amin'ny takolaka miaraka amina zanaka gana fotsy telo.
Amin'ny herinandro manaraka, mikasa ny hitatitra ny sasany amin'ireo bilaogy tononkalo Tiorka aho, satria zava-kanto nentim-paharazana efa ela tany Torkia ny tononkalo; ary hitati-baovao/zava-miseho ihany koa izahay ary antenaiko fa hisy koa ny fandraisam-peo sasany!